အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page7| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အမျိုးသားများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်း
26.1.2018 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားများ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သေချာတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကတော့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာသာဖြေခြင်းန...
အမျိုးသားတို့အတွက် အရေးကြီးသော ဆေးစစ်ချက်များ
19.12.2017 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေနဲစာရင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေ သွားပြတာ နည်းတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေကို မလုပ်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ပုံမှန်ဆေးစ...
အမျိုးသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက် ဤ (6) ချက်
17.12.2017 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အိပ်ချိန် လုံလောက်ပါစေ။ တစ်ညကို 7-9 နာရီလောက် အိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
2. ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ အခု ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့ ကင်ဆာရ...
16.10.2017 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ အရက်ကိုအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့် နှစ်ရှည်လများ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြ...
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုချိန်တွင် အမျိုးသားများပြုလုပ်လေ့ရှိသော အမှားများ
25.9.2017 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ်ဝန်တွေကိုတားဆီးဖို့အတွက် ကွန်ဒုံးက အရေးကြီးပါတယ်။ သို့သော် ကွန်ဒ...